बुधवार बिहानको भुकम्प जानासाथ गुल्मीका कुन-कुन पत्रकारहरुले के-के स्ट्टाटस लेखे? – Gulmiews
बुधवार बिहानको भुकम्प जानासाथ गुल्मीका कुन-कुन पत्रकारहरुले के-के स्ट्टाटस लेखे?
३० बैशाख २०७२, बुधबार ०४:०१ Sanju Kauchha
राजधानी सहित देशका बिभिन्न भागमा केही समय पहिले फेरि भुकम्पको धक्का महशुस गरिएको छ । बुधवार बिहान करीब २ बजेर ५ मिनेटमा भूकम्प गएको हो । भुकम्पको धक्का गुल्मीमा पनि राम्रैसँग महशुस गरिएको छ । भूकम्पपछि मानिसहरु घरबाट बाहिर आएका छन् । उज्यालो नहुँदै सबैलाई ओच्छ्यान छोडेर भाग्ने बनाएको भुकम्पको धक्का महशुस गर्नासाथ आँखा मिच्दै गुल्मीका को पत्रकारले सामाजिक सन्जालमा कस्तो स्टाटस लेखे? हेरौ:
हल्लायो तर भागीएन, अब त बानी पर्‍यो
भुकम्पको कम्पन महशुस हुनासाथ फेसबुकमा देखियो पत्रकार तारा भुषालको स्टाटस । नेपाल पत्रकार महासंघ गुल्मीका सचिब भुषालले आफुलाई अब भुँईचालोको कम्पन बानी परिसकेको, कम्पन महशुस हुँदा पनि नउठेको स्टाटस लेखेका छन् ।
फेरी आयो, गईसक्यो
मंगलबार दिनभरी जसो सानोतिनो झट्का आउने जाने क्रम जारी थियो । गुल्मीका पत्रकार अनिल खत्रीले पनि भुकम्पको धक्का महशुस गरेको केही बेरमै फेसबुकमा स्टाटस लेख्न भ्याईहले फेरी आयो, गैसक्यो । हैन अब त नेपाली जनताले सानोतिनो झट्कालाई सामान्य नै पो ठान्न थाले कि क्या हो ?
ल फेरी आयो, खाट हल्लायो । दराज पनि ।
नेपाल टेलिभिजनका गुल्मी संबाददाता हरी कुमार श्रेष्ठ मस्त निन्द्रामा भएकै बेलामा भुकम्पको धक्का महशुस गरे । मस्त निन्द्रामा थिए उनी अचानक खाट हल्लिन थाल्यो, दराज पनि हल्लियो । तुरुन्ताको तुरुन्तै उनले पनि फेसबुकमा स्टाटस अप्डेट गर्न भ्याईहाले ।
राती ३ बजेपछि पनि भुकम्पको धक्का सदरमुकाम तम्घासवासीहरु खुल्ला स्थानमा
अँध्यारैमा भुकम्पको धक्का महशुस गरेपछी हतार हतार बाहिर निस्केका पत्रकार शिवलाल शुबेदिले खुल्ला स्थानमा भेला भएका तम्घासवासीहरुको भिडबाटै फेसबुकमा स्टाटस छोडिहाले “राती ३ बजेपछि पनि भुकम्पको धक्का सदरमुकाम तम्घासवासीहरु खुल्ला स्थानमा”
फेरि आयो । रातको दुई बजे । सबै सडकमा । राम्रै हल्लायो ५ माथिकै होला ।
जन्मघर गुल्मीको आँपचौर भएपनी बेलायतलाई कर्मथलो बनाएका पत्रकार फडिन्द्र भट्टराई यतिबेला नेपालमा छन् । पारिवारिक कामको लागि जम्मा ३ हप्ताको बिदामा नेपाल गएका भट्टराईलाई यतिबेला उद्दारकार्य र राहत बितरणमा भ्याईनभ्याई छ । बिदा थपेर देसका बिभिन्न जिल्लाहरुमा राहत सामाग्री बितरण पस्चात धेरै दिन पस्चात काठमाडौं फर्केर आमासँग बाहिर त्रिपालमुनी सुतेका भट्टराईलाई पनि भुकम्पको धक्काले ब्युँझायो । उनले पनि तुरुन्तै लेखे स्टाटस “फेरि आयो । रातको दुई बजे । सबै सडकमा । राम्रै हल्लायो ५ माथिकै होला ।”
रुरु एफ.एमका कार्यक्रम प्रस्तोता रामकृष्ण कंडेलले यस्तो लेखे:
@gulminewsगुल्मीको पश्चिममा पनि थ्रीजी सञ्चालन हुदै https://t.co/gZDpA7W0GG #Gulminews #Gulmi6 mins agoRetweetपराल्मी बहुउदेश्य समाजद्धारा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न https://t.co/6JyQTCBROp #Gulminews #Gulmi9 mins agoRetweetगुल्मीमा दसैं पछी ८ सय भन्दा वढीलाई नयाँ नागरिकता https://t.co/0ol3eYqUFw #Gulminews #Gulmi12 mins agoRetweetयसरी तोकिदै छन् गुल्मीका स्थानिय निकायका केन्द्रहरु https://t.co/YbUbPqRxf6 #Gulminews #Gulmi8 hours agoRetweetके महिनावारी पर सार्ने औषधिको प्रयोग स्वास्यको लागी राम्रो हो ? https://t.co/UeLxyZxVE9 #Gulminews #Gulmi13 hours agoRetweet	गुल्मीको मौसम	Partly Cloudy	12 °C	30 Oct 2016